My iPhone agaghị Jikọọ na Wi-Fi. Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
enweghị ike ijikọ ekwentị na wifi
kedu ka m ga -esi detuo na mado na ekwentị m
ipad enweghị ike ijikọ na sava
foto m niile apụla na iphone m
My iPhone agaghị ejikọta na Wi-Fi. Nke a bụ ndozi!
Gị iPhone agaghị ejikọ na Wi-Fi na ị maghị ihe kpatara ya. Ikekwe kọmputa gị na-ejikọ, ma eleghị anya iPhone enyi gị na-ejikọ, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ nweghị ngwaọrụ ga-ejikọ ma ọlị. Ma eleghị anya, iPhone gị na-ejikọ na netwọk Wi-Fi ọ bụla ma e wezụga otu, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ naghị ejikọta na netwọk ọ bụla ma ọlị.
Enwere ọtụtụ maybes mgbe ị na-achọpụta na idozi nsogbu a, mana m ga-enyere gị aka iru ala ya. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị agaghị ejikọ na Wi-Fi na enyere gị aka idozi nsogbu ahụ , ma ọ bụ na iPhone gị ma ọ bụ eriri ikuku gị.
Ka ọ dịgodị, Na The Genius Bar…
Onye ahịa na-abata wee sị iPhone ha agaghị ejikọ na Wi-Fi. Ndị ọkachamara ahụ jụrụ ndị ahịa ahụ ka ha jikọọ Wi-Fi n'ime ụlọ ahịa ahụ, ọtụtụ oge, ọ na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụ nzọụkwụ mbụ iji chọpụta nsogbu a, yana ajụjụ mbụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị:
kedu ihe ịrọ nrọ banyere ikpuru pụtara
“M ga-iPhone jikọọ na ọ bụla Netwọk Wi-Fi, ma ọ bụ na ọ bụ naanị otu network my iPhone agaghị ejikọ? '
Ọ bụrụ na ịnweghị netwọk Wi-Fi ọzọ ị ga-eji nwalee iPhone gị, gaa Starbucks, ọbá akwụkwọ mpaghara gị, ma ọ bụ ụlọ enyi gị ma gbalịa ijikọ na Wi-Fi ha. Ọ bụrụ na iPhone gị jikọtara, ọ bụghị nsogbu ngwaike - enwere nsogbu n'etiti iPhone gị na eriri ikuku gị n'ụlọ.
Mara: Ọ bụrụ na iPhone gị anaghị ejikọ ọ bụla ikuku netwọk, mafere na ngalaba nke isiokwu a na-akpọ Hichapụ Ntanetị Wi-Fi niile echekwara na Gị iPhone .Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, gaa na ngalaba akpọrọ Ihe nyocha akụrụngwa . Lelee ederede m ọzọ ma ọ bụrụ Wi-Fi na-grayed na Ntọala !
Mgbanwe kachasị mfe
Ọ bụrụ na ịnabatabeghị, gbalịa gbanye iPhone gị na Wi-Fi rawụta, wee gbanwee ha.
On gị iPhone, pịa ma jide ike button ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi. Mia ihuenyo gị jiri mkpịsị aka gị wee chere ka iPhone gbanyụọ. O nwere ike buru 15 sekọnd ma ọ bụ karịa ka iPhone gbanyụọ. Next, jide ike button ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo na-egosi na ihuenyo.
Anyị ga-eji aghụghọ dị egwu iji gbanye rawụta Wi-Fi gị ma laghachi: Wepụ eriri ike na mgbidi ma gbanye ya.
Mgbe gị rawụta reboots, gbalịa reconnecting gị iPhone ka Wi-Fi. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, enwere nsogbu na wireless router gị wuru na ngwanrọ (mgbe ụfọdụ a na-akpọ firmware). Ọ bụ mmadụ ole na ole ghọtara etu netwọk Wi-Fi si arụ ọrụ. All Wi-Fi routers jiri nnoo otu ngwaike ike wireless netwọk, ma software wuru n'ime Wi-Fi routers dịgasị ukwuu site nlereanya ka ihe nlereanya.
Dị ka ọ dị na iPhone gị na kọmputa gị, sọftụwia etinyere n'ime eriri ikuku gị nwere ike ịdaba. Onye rawụta ahụ ka nwere ike ịgbasa netwọk Wi-Fi, mana ngwanrọ arụnyere anaghị aza mgbe ngwaọrụ gbalịrị ijikọ. Ọ bụrụ na ịtọgharị rawụta ikuku gị na-edozi nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike ịchọ ịlele weebụsaịtị nke onye nrụpụta iji hụ ma melite ngwanrọ (ma ọ bụ ngwa ngwa) maka router gị. Mmelite ngwanrọ nwere ike igbochi nsogbu ahụ ịlaghachi.
Mgbe iPhone gị jikọtara na Neti Wi-Fi niile, Ewezuga Otu
Ọnọdụ a na-eme ka o sie ike ịchọpụta nsogbu ahụ, karịsịa na Storelọ Ahịa Apple. Na-emekarị, onye ahịa enweghị ike mụta nwa okwu n'ihi na ọ na-eme n'ụlọ. Ihe kachasị mma onye ọkachamara nwere ike ime bụ inye ndụmọdụ ụfọdụ, ịtọgharịa ntọala ụfọdụ, ma chọọ ka onye ahịa nwee ọchichị. Enwere m olileanya na isiokwu a ga-enye aka karịa nke ahụ, n'ihi na n'adịghị ka Genius, ị nwere ike were ya laa.
Tupu anyị abanye n’ime mmiri, achọpụtara m na ọ na-enye aka ikwughachi nsogbu a: Gị iPhone agaghị ejikọ na Wi-Fi n'ihi na enwere nsogbu na iPhone gị ma ọ bụ wireless gị rawụta. Nsogbu ndị nwere iPhones dị mfe ịchọpụta, yabụ anyị ga-amalite ebe ahụ.
Nsogbu na iPhones na Wi-Fi Netwọk
iPhones na-echeta netwọọdụ Wi-Fi niile ha jikọtara na ya, yana paswọọdụ maka netwọkụ ọ bụla. Mgbe anyị lọtara ọrụ, iPhones anyị na-akpaghị aka jikọtara na Wi-Fi n'ụlọ anyị wee tinye paswọọdụ. Ma ọ dịkarịa ala, ha kwesiri.
Otu n'ime isi uru nke iPhone, na ihe ndị geeks na-eme mkpesa mgbe niile, bụ na ọ bụ mfe, ya mere amachi na usoro nke onye ọrụ nwere ike 'ịga n'okpuru nkpuchi' iji chọpụta nsogbu. N'adịghị ka Mac ma ọ bụ PC gị, iPhone gị enweghị ike igosipụta ndepụta nke netwọk Wi-Fi echekwara ya kemgbe ọtụtụ afọ. Can nwere ike “ichefu” netwọkụ Wi-Fi, mana ọ bụrụ naanị na ijikọla ya.
Gbanye Wi-Fi Gbanyụọ ma laghachi na ya
Otu ngwa ngwa mgbe gị iPhone na-adịghị na njikọ na Wi-Fi na-ngwa ngwa atụgharị Wi-Fi na azụ. Chee maka ya dị ka ịgbanye iPhone gị ma laghachi - ọ na-enye gị iPhone mmalite ọhụrụ na ohere nke abụọ iji mee njikọ dị ọcha na Wi-Fi.
Mepee Ntọala ngwa wee pịa Wi-Fi. Mgbe ahụ, kpatụ mgba ọkụ na-esote Wi-Fi na elu menu. Chere sekọnd ole na ole, wee gbanwee W-Fi azụ na!
Hichapụ Ntanetị Wi-Fi niile echekwara na iPhone gị
Na-esote, gbalịa tọgharịa ntọala data iPhone gị nke netwọ Wi-Fi. Nke a fixes nke a otutu oge, na niile ma eliminates-ekwe omume na a software nke gị iPhone na-akpata nsogbu. Gaa na Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia ma họrọ Tọgharia Network Ntọala .
’Ll ga-enyerịrị na netwọkụ Wi-Fi gị niile ma tinye okwuntughe ha ọzọ, yabụ gbaa mbọ hụ na ịmara ndị dị mkpa tupu ịmalite. Gbalịa reconnecting gị wireless rawụta mgbe gị iPhone reboots. Ọ bụrụ na ọ ka ga-ejikọghị, oge eruola lelee ikuku ikuku gị . Aga m egosi gị otu esi edozi ya na peeji na-esote nke edemede a.
Ibe (1 nke 2):